Göteborg: Wiil soomaaliyeed oo 25 jir ah oo lugu xukumay tobban sanno oo xarig ah | Somaliska
Göteborg: Wiil soomaaliyeed oo 25 jir ah oo lugu xukumay tobban sanno oo xarig ah
Maxkamadda magaaladda Göteborg, ayaa waxaa ay xabsi tobban sanno ah ku xukunay wiil soomaali ah, ka dib markii uu isku dayey inuu dilo sagaal ruux oo ku sugnaa suuqa Komettorget ee xaafadda Bergsjön ee bariga magaaladda Göteborg.
Labbo ka mid dadkii ku sugna sgoobta ayaa dhaawac ka soo gaaray xabadihii uu la begsaday. Dhageeysigii maxkamadda ayaa mid ka mid ah kuwii dhaawaca ka soo gaaray goobta ayaa sheegay in halkaasi u tageen siddii ay soo eeggi lahaayeen dhug dhugleey (mooto) laga soo xaday. Maxkmadda ayaa sidoo kale sheegtay in wiilkan uu sameeyey fal isku day dil oo bareer ah islamarkaasina sababay dhaawac dad aan waxba galabsan.
Wiilkan ayaa dhinaca kale waxaa uu iska fogeeyey oodeeymaha loo heeysto ee ah inuu doonayey inuu dilo dad balse marqaatiyaal meesha joogay ayaa labbo ka mid ah waxaa ay farta ku fiiqeen inuu iskaga ka dambeeyey falkaasi iskudeyga dilka ah.
Magaalooyinka waa ween ee dalkaan Iswiidhan ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey ku soo badanayey dhalinyarro soomaali ah kuwaas oo falal ammaan darro ah geesta. Dhalinyaradan ayaa qaarkood waxaa xabsiyada loogu dhaa dhiciyaa falalkaasi ammaan darradda ah iyo xatooyo.
Barnaamijka Hello Somaliska – 19-02-2012
Sharmaarke oo isagoo luguha looga xiray silsilad loo musaafuriyey dalka Talyaaniga
Duufaantii ku dhufatay wadamada waqooyiga Europe oo laga cabsi qabo in ay Sweden soo gaarto